Khilaafkii Doorashada oo Heshiis laga gaadhay. |
Khilaafkii Doorashada oo Heshiis laga gaadhay.
Sadexda xisbi qaran iyo xukuumada ayaa imka qalinka ku duugay heshiis cusub oo ay isla gaadheen.waxana wakhtigii doorashada oo hore Gollaha Guurtidu uga dhigay bisha April sanadka 2017 ay ka jareen sadex bilood iyo badh waxana imka lagu heshiiyay in doorashadu dhacdo 15.Dec.2016 ka.taas oo macnaheedu yahay in madaxweynaha loo kordhiyay sanad iyo lix bilood.
Gudoomiye ku xigeenka sadexaad ee Xisbiga UCID Cali Guray ayaa sheegay in xisbigoodu uu dadaal badan sameeyay “Waxa la yidhi hadii sida aad jeceshahay waydo sidaad ka fursan waydo ayaa la yeelaa. Xisbiga UCID dadaal badan iyo tanaasul goor walba ah ayuu u huray in la soo gaadho halka caawa la joogo. La isma xaasido eh xisbiga UCID la’aantii halkan la is lama soo gaadheen ee waxay ku hiran karaysay meel daran iyo kala dhaqaaq. Bal ogowna cid wal oo kale muddo kordhinta saamigeeda ayay ka heshay marka laga reebo Xisbiga UCID oo isagu ah dhinaca keliya ee aan waxba ku lahayn mudo kordhinta lagu wadhwadhay.” ayuu yidhi Cali Yusuf .
Heshiiskan oo shalay la gaadhay ayay xukuumada iyo Xisbiga Kulmiye codsadeen in ay dib ugula noqdaan Haayadaha kale ee saamaynta ku yeelan kara si khilaaf kale looga hortago,waxanay u muuqataa in maanta la isku wada raacay in doorashada wakhtigaa la qabto.
Arinta heshiiskan ayaa meesha ka saaraysa warwar bulshadu qabtay ,waxaanay ku dhamaatay sidii ummada Somaliland kusoo caana maashay oo ah isu tanaasul iyo wada hadal.
Goor dhaw ayanu idinla wadaagi doonaa muuqaalka heshiiskaa oo dhamaystiran.